Ganacsatada Shidaalku Haddii Shacbigii Iyo Xukuumaddii Illaahay Kasii Jeediyey, Ha U Tudheen Tooda Aakhiro | Berberatoday.com
Ganacsatada Shidaalku Haddii Shacbigii Iyo Xukuumaddii Illaahay Kasii Jeediyey, Ha U Tudheen Tooda Aakhiro
Qore: C/llaahi Aadan Cumar [ Wayab ]
Sicir-bararka abaaraha ka darran ee aafada ku ah bulshada dan-yarta ee Jamhuuriyadda Somaliland, waxa kow ka ah waxyaabaha ku sii shidaya qiimaha Shidaalka oo ay halkii Foosto ka taagan tahay Somaliland $200 [ laba boqol US Dollar ] halka uu ka gaadhay dunida qiimihiisu foostadii caydhinka ahayd wax ka hooseeya $27. [ Toddoba iyo labaatan US Dollar. ]
Lixdii bilood ee la soo dhaafay ee Sannadkii 2014ka, ayaa hoos u dhaca qiimaha Shidaalka ee adduunku si xawli ah u sameeyey hoos dhac aanay hore usii saadaalin ama u odorosin dhaqaalyahannada had iyo jeer ku foogan fallanqeynta kor u kaca iyo hoos u dhaca dhaqaalaha ee dunidu. Haddaba, inkastoo uu qiimihii shidaalka ee adduunku uu 70% [ boqolkiiba toddobaatan hoos u dhacay, ayey illaa hadda ganacsatada Shidaalka ee dibedda ka keenaa aanay weli wax la sheego ka dhimin marka la barbar-dhigo xaddiga hoos u dhac ee ku yimid shidaalka, iyadoo weliba ka ay soo iibsadaan yahay midka ugu tayada liita ee qiima ahaan ka sii hoos maraya inta uu hadda ka taagan yahay caalamka shidaalka tayada fiican leh oo ah $27 foostadii iyo wax ka sii hooseeya.
Waxa haddaba yaab leh, in ganacsatada shidaalku ay garan la’yihiin, in haddii Illaahay ka indho-saabay Xukuumaddii wax ka qaban lahayd ee la xisaabtami lahayd, isla markaana ka jeediyey dareenkii bulshada, in iyagu ay xag ALLAAH dartii eegaan oo ay tudhaan tooda aakhiro iyo tan maanta ee bulshadooda dan-yarta ah oo ay bal kala badh uun ka dhimaan qiimaha hadda ay ku iibiyaan, maadaama uu hoos u dhaca qiimuhu uu gaadhay in ka badan boqolkiiba toddobaatan. [70%]
Hore ayaa loo yidhi [ HUNGURI WAX KA WEYN LA GELIYAA WUU DILLAACAA ] sidaa darteed waxaan ganacsatada guud ahaan, gaar ahaana kuwa shidaalka usoo jeedinayaa in aanay dadka ku noqon sida gafanaha xoolaha dhiigga ka jaqa ee markuu dibbira dhaafo ku dhaca dhulka ee ay ku shaqeeyaan caqli saalax ah oo sii garan kara dagaalka ka dhex qarxi kara laba dabaqadood oo midna dhereg dartii u fadhiisan kari waayey, ka kalena gaajo darteed dhinacu dhulka u qaban waayo. Geesta kale Ganacsiga xorta ah, waxa barbar yaal inuu ahaado mid xalaal ah, isla markaana xorriyadda ganacsi ee uu Dastuurku idin siiyey maaha, sidaad doonto ka yeel dadweynaha, markaa idinkoo gees walba wax ka eegaya, waxa idinla gudboon inaad dib isugu noqotaan intaan laydinku baraarugin shicib iyo dawladba